Ku socota Saxaafadda (Aniguna ku jiro):
Tuesday 12th March 2019 12:21:06 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Burco
Wedka dila saxafiga iyo mihnaddiisu waa beenta. In qofka saxafiga ahi been sheegaa siyaabo kala duwan ayay ku timaaddaa;
in uu kas u sameeyo iyo in uu kama’ amma hubsiimo-la’aan u sameeyo – labadaba anshaxa mihnaddu wuu ka digaa. Si ay ku timaaddo ba, beentu waa wedka sumcadda iyo mihnadda weriyaha. Intaasi idinkuma cusba, waxa se u baahan inaynu u dhug yeellano arrinta dambe oo si fudud loogu dhaco, gaar ahaan warbaahinta casriga ah eebaraha bulshadu ka mid yihiin ayaa sahla in qaladkaasi dhaco. War baa qof soo qorayaa isagoon raacin cidda uu ka soo xigtay, sidii uu u sheegay wax baa iska beddelaya amma sidii uu u sheegay si aanay ahayn baa soo baxaysa! Waa sababaha aan u sibir-saaro in qof saxafi ah oo war soo qoray dadku ugu qoraan; ‘Source’ ‘Caddeyn soo raaci’ IWM.
Haddaba, si saxafigu warkii ugu tebiyo baraha bulshada, karaamadiisuna u badbaaddo oo aanu u noqon qof ma-jirto sheegay, waxaynu ku baxsan karnaa haddaanu saxaafadda nahay tallaabooyinkan;
1- Xogtaad soo qorayso raaci halka aad ka keentay, tusaale ahaan – ‘Waxaas ayaa dhacay’ sida uu sheegay hebel amma lagu baahiyay meel heblaayo! Taasi waxay suurtogelinaysaa in xitaa haddii xogtaa runnimadeeda wax iska beddelaan in masuuliyaddu fuusho cidda aad xigatay, halkaa karaamadaada ayaa ku badbaadday iyo in dadku kuu arkaan ‘Looga qaateen’
2- Sheeko socota oo isa soo taraysa ‘Developing Story’ dadka u sheeg in waxaasi dhaceen, lagana yaabo inay isa soo tarto. Taasi waxay fakaag amma faalal (Space) u bannaynaysaa haddii warkaaga wax iska beddelaan, inaanu beenoobin.
3- Dhacdo aad sheegayso oo markaas soo baxday ka fogow faahfaahinteeda hoose, sida tirooyinka, goobaha cayiman IWM. Taasi waxay sababaysaa in aan warkaagu beenoobin oo tusaale ahaan; haddii dhacdo tuulo ka dhacday intii aad sheegi lahayd magaca tuulada, dabadeed tuulo kale noqon lahayd, waxa kaaga habboon inaad sheegto magaalada ugu dhaw, ‘Dhacdadaas oo ka dhacday duleedka magaalo heblaayo’ – mar kale fakaag baad siisay in aan warkaagu beenoobin. Sidoo kale, haddii shil dhaco tirada dadka dhimatay/waxyeelladu gaadhay ha ku degdegin inaad sheegto, si aanad beenaale u noqon!
Guud ahaan waxba innaga xumaan maayaan haddaynu dabbaqno mabda’ ay saxaafaddu leedahay oo dulucdiisu tahay; ‘Degdeg aad u sheegto, hubsiimaa ka door roon!’
F.G: Waxa laga yaabaa inaanan wax cusub sheegin, waxase hubaal ah inaynu dhammaanteen u baahannahay inaynu dabbaqno! Inaad ogaato/taqaanno waxa ka quman, kana waxtar badan inaad shaqada ku dabbaqdo.#AnigubaShalay
Waxa Qoray: Barkhad M Kaariye
[Daawo:-] Puntland Oo Somaliland Ugu Baaqdey Inay Joojiso Dacwada Korneyl Tuke Ee Mareykanka Ka Socota.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay madax ka socotay
Dhalinyrada Barnaamijka Shaqo Qaran Oo Fariin Ku Socota Xuska 18-May Ka Soo Diray Dararweyne [Muuqaal]
[Akhriso:-] Wasiir Dawlada Ka Tirsan Oo Shaaciyey Halis Ku Soo Socota Dalka + [Muxuu Qoonsaday?]
Faarax Murtiile Oo Puntland Ka Soo Qaaday Hees Ku Socota Ceerigaabo Iyo Xaalada Kacsan + Sarbeeb Siyaasadaysan [Muuqaal]
Hambalyo Aroos Wacan Oo Ku Socota Arooska Haldoor Maxamed Maxamuud Cabdi Cali (Maxamed Shaarub) iyo Marwadiisa Nasriin C
Muwaadin Lacag Kumanaan Doller Ah Ku Lahaa Dawladda Somaliland Oo Geeryooday + Shaki Dhimashadiisa Laga Qabo Iyo Baadhi
"Dhibaatada saxaafadda waxay tahay, in la gaadhsiiyo madaxweynaha, oo golaha wasiirada"
Coldoon Oo Xalay Saldhiga Burco Lagala Baxay + Mudaharaadyo Ka Socda Burco Iyo Badhasaabka Oo Saxaafadda Caydhiyey [Muuq